» असोजबाट घटे चितवनमा डेङ्गुका बिरामी
असोजबाट घटे चितवनमा डेङ्गुका बिरामी
३ आश्विन २०७६, शुक्रबार १६:०३ प्रकाशित
चितवन, असोज ३ – भदौको तेस्रो र चौथो साता अत्यधिक देखिएको डेङ्गु रोगको सङ्क्रमण घटेको छ। साउन पहिलो साताबाट क्रमशः बढ्दै गएको डेङ्गु रोगको सङ्क्रमण पछिल्लो एक साता दैनिक रुपमा घट्दै आएको चिकित्सकले जनाएका छन्।
भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलका अनुसार गत भदौ २२ गते एकै दिन एक हजार नौ सय २२ जना बहिरंग सेवामा आएकामध्ये नौ सय मेडिकल विभागमा रहेकामा धेरैलाई डेङ्गु सङ्क्रमण देखिएको थियो। सोही दिन अघिल्ला दिनहरुका तीन सय बिरामीले पुनः मेडिकल बहिरङ्ग सेवामा स्वास्थ्य परीक्षण गराएका थिए।
मेडिकल विभागका प्रमुख डा.प्रकाश खतिवडाका अनुसार त्यस दिन एक हजार दुई सय ३० जना बिरामी हेरिएको थियो। त्यसपछिका दिनहरुमा क्रमशः बिरामी घट्दै गएको उनले जानकारी दिए। बिहीबार अस्पतालको बहिरंग सेवामा एक हजार तीन सय बिरामी आएकामध्ये पाँच सय हाराहारी मात्रै मेडिकल वार्डमा आएका थिए। तिनीहरुमध्ये तीन सय जतिलाई ज्वरोको सङ्क्रमण रहेकामा केहीलाई मात्र डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको डा. खतिवडाले बताए।
अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा. भोजराज अधिकारीले भर्ना भएका एक सय जना बिरामीमध्ये ६० जना ज्वरोका हुन् र तिनीहरुमध्ये ६० प्रतिशतसम्म डेङ्गुका हुने गरेकामा अहिले घटेर १५ देखि २० प्रतिशतमा झरेको बताए। यद्यपि मौसमी ज्वरो भने रहिरहेको उनको भनाइ छ।
लगातार परेको वर्षाले तापक्रम घटेका कारण डेङ्गुको सङ्क्रमण पनि घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका कीट नियन्त्रक राम केसीका अनुसार साउन यता बिहीबारसम्ममा जिल्लामा बिरामीको सङ्ख्या दुई हजार पाँच सय १५ जना पुगेको छ। आठ हजार दुऐ सय २१ जनाको रक्त परीक्षणका क्रममा सो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भेटिएका हुन्। रासस
नेपालमा आज थप ६ हजार ८२७ जनामा कोरोना पुष्टि, १० को मृत्यु